I-T-collar enemikhono yase-china mveliso kunye nabenzi | WG
Uhlobo: Ijezi eyolukiweyo emile okwe-T ikhola eneziphu yamadoda nabafazi
Inkqubo: Ukunxiba okuphezulu kwezemidlalo
Izinto: Umqhaphu welastiki ophezulu
Phawu: ezemidlalo / ezemidlalo, ezakudala, umgangatho olungileyo
I-WG ithatha amanyathelo abukhali kulawulo lomgangatho wemveliso. Rhoqo iisampulu zokuthunyelwa kwesimbo ngasinye kunye nombala ziya kuthunyelwa ukuvunywa ngaphambi kokuba iimpahla zikhutshelwe ukuhanjiswa.
Abanye abathengi bathanda ukuba nenkonzo yangaphandle echongiweyo ukuba ingene kumzi-mveliso wethu kwaye ihlolisise into nganye nganye.
Ungazigcina njani iijezi ezinithiweyo:
1.I-Knitwear kulula ukuyilungisa, ke ngekhe uyitsale ngamandla, ukuthintela ukumila kweempahla kwaye uchaphazele ukunxiba kwakho.
2. Izambatho ezinithiweyo kufuneka zomiswe emthunzini emva kokuvasa, zixhome kwindawo engena umoya kwaye yomile, kwaye kufuneka ibekwe iflethi xa isomiswa, kwaye ibekwe ngokungqinelana nobume bokuqala bempahla ukuthintela ukuvela.
3. Izambatho ezinithiweyo kufuneka zikuphephe ukuvezwa kukukhanya kwelanga, okuza konakalisa ubukhazikhazi nokuqina kwazo kwaye kuyenze ibe tyheli namnyama.
4. Emva kokunxiba ijezi enithiweyo ixesha elide, amanye amalungu aya kubengezela. Ngale nto, fafaza umxube weviniga kunye namanzi, emva koko uyihlambe ukubuyisela imilo yoqobo.
5. Ijezi ezimhlophe ziya kuthi ngokuthe ngcembe zibe mnyama emva kwexesha elide. Ukuba ijezi icociwe kwaye ibekwe efrijini iyure enye, yithathe uyikhuphe ukuze iyome kwaye iya kuba mhlophe intsha.
I-Knitwear iya kuba banzi kwaye ityebe emva kokunxitywa ixesha elide, ngakumbi ukucoca okungafanelekanga kuya kubufutshane kakhulu ubomi bayo.
Ukuze uyibuyisele kwimeko yayo yoqobo, ungayifaka emanzini ashushu. Ubushushu bamanzi kukhethwa phakathi kwe-70-80 degrees. Ukuba amanzi ashushu kakhulu, aya kuncipha kakhulu. Ukuba imikhono okanye umjelo wejezi uphulukana nokuqina kwawo, inokuba yinxalenye efakwe emanzini ashushu angama-40-50, ikhutshwe kangangeyure eziyi-1-2 ukuze yome, kwaye ukuthamba kwayo kungabuyiselwa. Ukongeza, xa uhlamba ijezi okokugqibela, yongeza iviniga encinci ukunciphisa isepha eseleyo iAlkali inokugcina ngokufanelekileyo ukuqina kunye nokuqaqamba kweswetha.
Sukuxhoma elangeni emva kokuhlamba. I-Wring okanye ukuveza elangeni. Kuya kufuneka ucofe amanzi, uwavuthulule, uwafake engxoweni yomnatha, kwaye uwuxhome kwindawo engenisa umoya ukuze wome.
Egqithileyo I-Ladies 'intambo ejikelezayo yentamo evulekile
Okulandelayo: Ihempe yabasetyhini ehlotyeni
Elungiselelweyo V-intamo uboya ivesti ovaroli
Ijezi yabantwana eyakhiwe ngeepayi ezintathu ...